एउटा गितको जन्म - Namaste Post
एउटा गितको जन्म
नमस्ते पोस्ट २०७४, २४ पुष सोमबार १७:११ 0
बिहानैदेखि डुंगा लाग्छ घाटमा । सिमलु डुंगाभित्र बसेर कोसी वारपार गर्छन् यात्रीहरू । चकमन्न घाट निकैबेर कुरेर एक झमट बटुवाहरू तारेपछि ठूलो ढुंगामा नाउ बाँधेर बूढो माझी केके बर्बराउँदै सिमलबोटमुनिको बुकुरातिर आइपुग्छन् । बूढो अनुहार, मुखैभरि चाउरी नै चाउरीका धर्सा अनि हातपाखुरा, निधार, गालातिर घाउका थुपै्र खतहरू । उनकी छोरी कि बुहारी हो, ठूलो बटुकोभरिको जाँड उसको हातमा राखिदिन्छे । घटघट जाँड पिएर डकार्दै गर्दा कोसीपार जान आएका एक जना बूढो बाहुन यसो नियाल्दै उनीछेउ आएर आश्चर्य मान्दै भन्छन्, ‘राम राम… बान्ने माझी होइनौ ? फुलेर सेतै भएछौ त ! तिम्रा निधारमा त्यो खत नभए के ठम्याउनु मैले ? कस्तो मजाको बलिष्ट तन्नेरी हेर त ..!’ ‘तिम्रो पनि त दाँत फुक्लेर कस्तो चिन्नै नसक्ने भएछौ ! कस्तो पुष्ट बाहुन केटो थियौ । अड्डाको काममा माझीगाउँ पस्दा मसँग मीत लाएर सबै काम सकेर हिँडेका थियौ ।’ ‘मुड्कीले ढुंगा फुटाउलाजस्तो हेर हेर, आज त्यै मान्छे होइनजस्तो ! ’ ‘के गर्नु त बाजे, सिमल रुख जत्तिको पनि रैनछ त मान्छेको आयु । कोसीमाथिको आकाश नीलै थियो कोसी पनि नीलै छ तर म मात्रै कपाल फुलेर सेतै भइगएँ त ! डुंगा ख्याउँदाख्याउँदै हातगोडा गलिगए । माछीजाल बोकेर पानीका रहहरू चहार्दाचहार्दै कालको नजिक पुगिगइयो ।’ ‘के गर्नु त बाबै, म बुद्धि घोटेर तिमी बल घोटेर बूढो भयौ । बाबै.. भगवान्हरू त बूढा भएर मरेर गए भने …!’ म बाहुन मित्र र बान्ने माझीको कुरा उनीहरूतिर नहेरी एकचित्त लाएर सुनिरहेको हुन्छु । ‘जति बाँच्यो उति आयु घट्ने हगि बाजे मान्छेको ?’ ‘अब तिमी पनि हेर्दाहेर्दै काम गर्न नसक्ने हुने होलाउजस्तो लाग्छ…।’ ‘हो त, तर मान्छे मरे पनि काम त मर्दैन नि बाजे । हामी नभए पनि डुंगा चलिरहन्छ । आउनेजाने बटुवाहरू पनि भइरहन्छन् । खेवाको पैसा उठाउने अर्कै कोही होला..!’ एकछिन चुप्प लागेर माझी बूढाले फेरि पुरानो कुरा उप्काए, ‘अनि, उहिले तिमीले मसँग मीत लाएको कुरा चैं बिस्र्यौ बाजे ?’ ‘तालुका रौँहरू त सप्पै खुइलिसके, के गर्छौ हिजोका कुरा ! मीत लाएको कुरा सम्झेर अब हुने के पो हो र ! त्यो पनि खुइलिसक्यो !’ अलि बाउँडिएको कुरा सुनेर बान्ने माझीले नमज्जा मान्यो । सायद उसको मनले भन्यो होला, ‘बाठो बाहुन, काम फत्ते पार्न मीत ला’को नाटक गर्‍याथिस् नि उहिले !’ बूढो माझीलाई जङ चलेको प्रस्टै थाहा हुन्थ्यो । बाहुनलाई त्यहाँ त्यसै छोडेर ऊ जाँड बेच्ने अर्को बुकुरोतिर लाग्यो ।
(नेपाल साप्ताहिकबाट साभार)